Toetoetran'ny mpanjifa 5 tsy mivadika amin'ny varotrao sy ny varotrao | Martech Zone
Zoma, Martsa 4, 2016 Sabotsy, Martsa 5, 2016 Douglas Karr
Brett Evans dia talenta mpivarotra eo an-toerana ary nanoro hevitra ahy izy hamaky Ny fivarotana fanamby: mifehy ny resaky ny mpanjifa ao anatin'ny iray amin'ireo dinika marobe momba ny fanindry ny varotra sy ny varotra.
Miorina amin'ny fandinihana feno an'ireo repoblika fivarotana an'arivony maro amin'ny indostria sy jeografia marobe,Ny fivarotana Challenger milaza fa ny fananganana fifandraisana mahazatra dia fomba very, indrindra raha ny momba ny fivarotana vahaolana sarotra sy lehibe amin'ny orinasa. Ny fandinihan'ny mpanoratra dia nahatsikaritra fa ny varotra varotra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia latsaka ao anatin'ny iray amin'ireo mombamomba azy dimy mazava, ary na dia afaka manome ny fahombiazan'ny varotra eo ho eo aza ireo karazana reps ireo dia ny iray-ny Challenger ihany no mahavita be hatrany.
Tsy dia mpankafy boky fivarotana aho. Matetika aho no mahita azy ireo diso tafahoatra sy manosika ny fizotrany izay mety handrisika ny mpivarotra sasany, saingy tsy izy rehetra. Fantatro ny olona mpivarotra mahatalanjona izay mikolokolo fifandraisana nandritra ny taona maro ary nifanarahana tamina fifanarahana lehibe, fantatro ny olona mpivarotra atokisana na inona na inona orinasa iasàny - mitondra mpanjifa miaraka amin'izy ireo avy amin'ny firenena, ary fantatro aza ny mpivarotra ivelany mahatalanjona izay mankafy ny fikapohana. ny telefaona tontolo andro ary na izany aza dia manintona ny fanantenana ao anatin'ny minitra vitsy handroahana azy ireo amin'ny dingana manaraka.
Hafa mihitsy ity boky ity - mamotika ireo toetra amam-barotra isan-karazany ary manome fikarohana vaovao. Tsy miresaka momba ny antony manosika sy ny paikadin'ny mpivarotra ihany izy io, fa manome kosa fijery feno momba izay tadiavin'ny mpanjifa amin'ny fizotry ny varotra. Ireto misy toetrany 5 voalohany, arakaraka ny maha-zava-dehibe azy, tadiavin'ny mpanjifa amin'ny fifandraisany amin'ny solontenan'ny mpivarotra:
Manolotra Rep fomba fijery tsy manam-paharoa sy sarobidy eny an-tsena
Manampy ahy i Rep mitily safidy hafa
Manome i Rep torohevitra na consultation mitohy
Manampy ahy i Rep sorohy ny vanja milevina mety hitranga
Rep mampianatra ahy amin'ny olana vaovao sy ny vokany
Voamarikao ve ny fahaizanao, ny fahaizanao mifampiraharaha, ny fampiakarana ny hafainganam-pandeha, ny hafainganam-pandeha hanakatonana, na ny toetra hafa ao amin'ireo top 5 ireo? Tsia. Raha ny marina, ny toetra roa manaraka dia ny mora vidina ary manana fanampiana marobe manerana ny fikambanana.
Jereo ny fitoviana eo amin'ny karazana varotra iainanao ny tadiavinao sy ny karazana paikadim-barotra momba ny votoaty ampiharinao ho an'ny mpanjifanao sy ny mpanjifanao Antenaina fa hitanao izay hitako! Andao hosoloina ireo teny ireo:
Manolotra ny atiny fomba fijery tsy manam-paharoa sy sarobidy eny an-tsena
Manampy ahy ny atiny mitily safidy hafa
Manome ny atiny torohevitra na consultation mitohy
Manampy ahy ny atiny sorohy ny vanja milevina mety hitranga
Ny atiny mampianatra ahy amin'ny olana vaovao sy ny vokany
Mitete Mic! Ireo toetra rehetra ireo dia manondro zavatra iray - fananganana roa fahatokiana, fahefana ary sanda rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny prospect sy ny mpanjifa. Ny mpivarotra tsara indrindra mahalala izany ny fomba fanakatonan'izy ireo fifampiraharahana… ary ny atiny tsara indrindra sy ny ekipa marketing ara-tsosialy dia ny fahafahany manakatona fifampiraharahana, na mitarika vinavina amin'ny alàlan'ny fantsom-panovana, na manampy ireo ekipan'ny varotra hahazo tombony amin'ny fifaninanana.
Tags: brent adamsonresaka amin'ny mpanjifampanjifa tsy mivadikatsy fivadihanamattthew dixonvarotra toetrany mpivarotra am-pihantsiana